आटा खान हुने मैदा खान नहुने किन ? – Sky News Nepal
२६ कार्तिक २०७८, शुक्रबार १५:०६ मा प्रकाशित
उस्तै स्वभावका खानेकुरामा यस्तो भिन्नता हामीले माथि उल्लेख गरिएका खानामा मात्रै होइन, यसबाहेकका अरु खानामा पनि पाउन सक्छौं । जस्तै, सेतो चामलको भातभन्दा हल्का खैरो रंगको भात स्वास्थ्यको लागि उपयुक्त मानिन्छ । पाउरोटीमा पनि सेतोभन्दा खैरो रंगको पाउरोटी नै स्वास्थ्यको लागि उचित मानिन्छ । यसको भित्रको विज्ञान के हो त ? हामीले पोषणविद् सञ्जय महर्जनसँग यसको उत्तर सोधेका थियौं । महर्जनको उत्तर यस्तो छ । सामान्यतया कुनै पनि खानाले हाम्रो शरीरमा कति मात्रामा शक्ति प्रदान गर्छ र त्यो खानाबाट रगतमा कुन गतिमा शक्ति प्रवाह हुन्छ ? भन्ने आधारमा खानाको गुणस्तर निर्धारण गरिन्छ । अर्थात्, कुनै खाना खाँदा छिट्टै नै भोक लाग्छ, तर कुनै खाँदा लामो समयसम्म लाग्दैन ।
तत्काल कुनै कामको लागि शक्ति चाहिएको छ भने मधुमेहको समस्या नभएकाहरुले खान त मिल्छ । तर चिनीको तुलनामा मिस्री राम्रो हुने भएकोले मिस्रीलाई सानो सानो टुक्रा बनाएर यसको सेवन गर्नु बढी उचित हुन्छ । (अनलाइनखबर)